Budata Farming Simulator 14 maka Windows
Budata Farming Simulator 14
Free Budata maka Windows (67.00 MB)
Budata Farming Simulator 14,
Ugbo Simulator 14 bụ ihe kachasị ewu ewu na egwuregwu ịme anwansị ugbo dị na ntanetị Windows yana mkpanaka. Egwuregwu simulator, nke anyị nwere ike ịkọ ubi nke anyị dịka anyị chọrọ, na -eji traktọ nke ezigbo ụlọ ọrụ mepụtara, ka emebere ka egwu ya dị mfe na mbadamba na kọmputa.
Ọ bụrụ na ị na -achọ egwuregwu ịkọ ubi nke na -enye eserese dị mma na egwuregwu egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na mbadamba Windows 8 na kọmpụta gị, Farming Simulator 14 bụ nezie egwuregwu izizi ị kwesịrị ilele. Negwuregwu a nwere egwuregwu ụwa mepere emepe, anyị nwere ike kụọ ngwaahịa dị iche iche dịka ọka, ọka na canola nubi anyị wee ree ha nahịa. Enwekwara ike ịbawanye ego anyị site nịzụta mmiri ara ehi anyị na -eri ma na -eto na ahịhịa na ahịhịa, na site nire ahịhịa na ahịhịa na osisi biogas.
Farming Simulator 14 bụ egwuregwu ịme anwansị mara mma nke ga-emikpu gị nime egwuregwu egwuregwu ozugbo. Mmepụta ahụ, nke m chere na ị ga -enweta na ụdị nnwale ahụ, kwesịrị ịchọ mma nke onye ọ bụla hụrụ ịme ncha nanya.
Ngwa ndị emetụtara: Budata Farming Simulator 22
Farming Simulator 14 Ụdịdị
Nha faịlụ: 67.00 MB
Mmepụta: GIANTS Software